Ku baashaal logos ... Dukaamada Indy Coffee | Martech Zone
Arbacada, Nofeembar 28, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kuwii idinka mid ah ee akhrisay balooggeyga xoogaa waan ogahay inaan jeclahay koob weyn oo kafee ah. Saaxiibbadayda maxalliga ahi way ogyihiin inaan jeclahay la-joogista baandooyinka Koobka Bean. Waa dukaan kafee aad u fiican food cunto aad u fiican, dad aad u fiican, muusig toos ah iyo kuraas fara badan iyo qol raaxo leh
Erik Deckers oo ah jaaliyad Indy ah qoray oo ku saabsan meheradaha qaxwaha madaxa-bannaan ee halkan ku yaal iyo xitaa uu dhistay khariidaddiisa gaarka ah ee Google si uu u muujiyo dadka meesha jooga dukaanno kafee oo madaxbannaan ayaa ku yaal.
Tan iyo markii aan hadda bilaabay qabashada nooca alfa ee Codsiga khariidaynta ee Shimbiraha Duurjoogta ah Unlimited, Waxaan u soo bandhigay inaan iskaashi la yeesho Erik goob si loola socdo loona maareeyo Dukaamada maxalliga ah ee Madaxa Banaan. Caawa waxaan ka shaqeeyay astaanta… Anigu ma ihi farshaxan sawireed waxaanan jeclahay inaan wax khiyaamo oo aan ka bilaabo clipart bilaash ah - laakiin waxaan u maleynayaa inay tani tahay bilow wanaagsan! Waxaan u jiidayaa clipart-ka Sawirka ka dibna kaliya ku dar lakabyo isku qaab ah.
Waa tan hal talo oo adiga kuu ah, Microsoft Clipart is dhab ahaantii dulinka ku saleysan waadna kula shaqeyn kartaa gudaha muujiye. Khiyaanadu waa inaad soo dhoofsato clipartka arjiga Microsoft oo kuu oggolaan doonta inaad dhoofiso clipart qaab ah Sawir-qaade saaxiibtinimo. Microsoft Visio waa mid ka mid ah badeecadaha noocaas ah.
Raadi goob loogu talagalay dukaamada kafeega ee madaxbannaan Indianapolis si dhakhso leh loo furo, iyo sidoo kale kuweenna beta codsigayaga khariidaynta waayo, Shimbiraha Duurjoogta Aan Xaddidnayn, oo lagu dhex daray nidaamkooda maareynta maadooyinka.
Tags: atymqiimaha seosaxsanimisa ayey seo ku kacaysaahubspotwakaaladaha suuq geyntasuuqoqiimaha seoseomozSlider
Nov 29, 2007 saacadu markay tahay 7:35 PM
Waxaan ku siinayaa 9 ka mid ah 10. Ma ahan wax xun u ah naqshadeynta sawirada adoo adeegsanaya clipart. 😉
In kasta oo, waxaan u maleynayaa inaad hooska u dhawaato koobka, markaa waad iska ilaalinaysaa muuqaalka kafeega UFO-ee sabaynaya.
Nov 29, 2007 saacadu markay tahay 8:21 PM
U hubso inaad iska hubiso shirkadda Monon Coffee haddii aad ku jirto aagga Broad Ripple. Waxay ku taal bartamaha Broad Ripple waxayna siisaa jawi diiran, saaxiibtinimo. Si aad u wada dhammayso, laba ka mid ah milkiileyaashu waa dad aan la shaqeeyo Duurjoogta Duurjoogta Aan Xaddidnayn! Sidee taasi u tahay isku xirnaanta?!
18, 2007 at 8: 30 AM
Nice shaqo fiican! Waan ku faani lahaa inaan taas la imaado.
18, 2007 at 8: 41 AM